Samanje - iqoqo iziphuphutheki kanye nobuchwepheshe, ngawo ungakwazi ukunquma ngisho indawo umuntu ngoba nenombolo yakhe kamakhalekhukhwini. Ngokuqinisekile hhayi kanye wavakashela umcabango onjalo, akunjalo?
Okwamanje, cishe wonke opharetha mobile ukunikela amanani hhayi kuphela yokuncintisana for izingane nabazali bazo, kodwa futhi amanye amasevisi. Ngakho, "MegaFon" opharetha inikeza izinga ekhethekile "Smeshariki". Vumelanani ngokuthi, ngezinye izikhathi esikolweni ngiya ekhaya, ingane ingase ibe aphansi ngasekupheleni, waqala ukudlala nabangani emgwaqeni. Futhi ekhaya ngesikhathi abazali bakhe balinde ngeze nazvanivaya ifoni. Ingane idlala futhi akuzwakalanga insimbi.
Kulokhu, kuyoba usizo kakhulu inkonzo enjalo, ngawo ungakwazi ukunquma indawo inombolo yocingo. Ukuze wenze lokhu, udinga nje uthumele isicelo ezidingekayo ukuze opharetha. Izindleko masevisi wonke umuntu, kodwa ayidluli ruble 10. Imali sisuswa ngokuzenzakalela, bese ucingo impendulo iza izixhumanisi lapho umsebenzisi ikhona.
izinhlelo awusizo noma amaqhinga evamile ye nabaphangi?
Akubuzwa, zithola Inthanethi ngomumo zahapat abanye abantu imali, okungenani lutho kunabantu. Futhi ukuyengela abasebenzisi ongaqaphile ezihlukahlukene namaqhinga emagcekeni namasevisi ukusiza ukuthola indawo inombolo zokubhalisa.
Eqinisweni, ukusetshenziswa kwalezi zinhlelo ngaphandle kwemvume umuntu umane emthethweni. Lokhu kubizwa ngokuthi ilungelo langasese. Kule, ungacabanga ngokuphepha ukuthi iningi inethiwekhi ezihlongozwayo ukuqapha izinombolo hlelo - nje icebo ukuze enze inzuzo ngezithukuthuku zabanye.
Ukulanda uhlelo okuthiwa ikuvumela ukuthola inombolo yocingo, wena engozini yokuyithenga abavamile ejwayelekile Umbuso izicelo "blyutuza".
The main Iqhinga umkhonyovu
Ake sibheke amaqhinga ezivamile esetshenziswa kubaduni ukuheha abathengi. Okokuqala ngokuningiliziwe ukuchaza izintelezi yalolu hlelo, okuyinto hhayi kuphela indawo inombolo yocingo ukuze abone, kodwa futhi ukudala ukufinyelela i-SMS kanye izingcingo umsebenzisi.
Ulingeka nguhlelo ezinjalo kumnandi (ngisho ukuba okufanayo futhi khulula), uzama ukulanda ifayela. Ngenxa yalokho, uphiwa kuphela ukuqinisekisa ukuthi ungumuntu wangempela, futhi uthumele i-SMS ethafeni enombolweni iDemo. Ungakwenzi, wena nje ulahlekelwe imali yakho. Ngemva kokuthi uthumele i-SMS, uzocelwa ukuthi uthumele okunye umyalezo ukuqinisekisa ukuthi ngempela, hhayi isofthiwe irobhothi.
Ngemuva kokuthumela SMS, ungaba ngisho ebomvu. ezithakazelisayo kakhulu ukuthi le sevisi itholakala kuphela kwabanye opharetha mobile. Ngakho, nenani iDemo ukuthumela umlayezo siyaqonda.
Enye inguqulo ethandwayo ka kanjani uhlelo ingalandwa, esiza ukucacisa indawo yeselula, kanje. Ingabe unikela thwebula ngaphandle kwenkokhiso. Futhi ngempela ukukwenza ngaphandle kwezinkinga. Kodwa akwenzeki kusebenze, njengoba uhlelo kudinga ukhiye noma ifayela ukufakwa entulekayo. Kodwa ngo bloknotovskom amafayela ungase ukuthole kahle umlayezo. Inikeza imininingwane ngalokho Uhlelo top-secret inikeza-skrini okubonisa ukuthi isebenza kanjani, bese nizimisela ukuthenga wakhe ukhiye ukuthola ruble 1000, isibonelo. Plus, unikezwa ikheli leposi lapho ungakwazi ukubhala bese ubuza noma yimiphi imibuzo mayelana nohlelo. Kodwa alimise, kuqala ukukhokha imali, bese uthola ukhiye.
Beautiful, kodwa akusizi ngalutho, ngoba ukhiye futhi ngeke ulinde. Namanje ngokuvamile kakhulu imikhonyovu ukunikela ukukhokha ingxenye yemali noma ingxenye encane izindleko zohlelo, ngawo ungakwazi kalula ukunquma indawo inombolo yocingo se oyifunayo.
Ingabe kalasilingo esincane, abafisa ukuthenga mathuluzi ebumnyameni internet, ngamunye ingcosana yakho konke, futhi waqoqa ngempela imali esezingeni elifanele.
Kwezinye izitolo inthanethi ezikhethekile ukunikeza yokuyithenga kweqembu bavezelwe amathekniki ahlukahlukeneko, okuyinto ikuvumela ukuba ugcine ithrekhi umuntu ukulalela efonini yakhe izingcingo, funda i-SMS, kanye, yebo, ukucacisa izixhumanisi indawo lapho ekhona.
Kukhona zombili amadivaysi ngabanye kanye amafoni nge izinhlelo olufakwe, futhi la magajethi akahlukile kwezangempela zazo. Lokhu kuyaqondakala, uma unquma ukunikeza umuntu smartphone kusukela inkampani "Samsung", khona-ke kufanele engcono ukuhlangabezana sha. Yilokho inketho - ungakwazi ukuthenga igajethi nje banikele.
Izindleko yalezi amadivaysi kuyizikhathi ezimbili kunakunoma okwangempela. Ngisho noma unquma ukuthenga "elihlakaniphile" imodeli ezifana ifoni, qaphela. Dinga kusengaphambili ngokuphelele? Cabanga-ke futhi ungakwenzi. Ngo inethiwekhi eziningi saytov- "esikhashana", enganikeza ezihlukahlukene namakhono athile, futhi ngemva kwenyanga izinsiza umane esabakho.
Amasevisi opharetha mobile
Empeleni, ukuze bazi ukuthi ukucacisa inombolo indawo yomuntu, nje ushayele ku inkampani yeselula komqhubi yayo. Okwamanje, kukhona indlela ukuthola izixhumanisi umuntu kusemthethweni futhi esemthethweni. Kuyodingeka ukuthumela isicelo kumhlinzeki wensizakalo yakho nge othola inombolo oyifunayo.
Nokho, kukhona indlela onjalo ethile enkulu. Thola izixhumanisi ozithandayo, ungakwazi kuphela ngemva zokubhalisa edingekayo uma uqinisekisa isicelo futhi kuzovumela opharetha ukusebenzisa le nsiza.
Ngamunye opharetha mobile, le ndlela ibizwa ngokuthi ngendlela yalo, kodwa empeleni yayo uyefana. Wena ukuthumela isicelo bese uthole izixhumanisi. Kunengqondo ukuphetha ngokuthi yonke into ilula, kodwa hhayi ngempela. Uma uthumela umbhalo oyifunayo inombolo yakho yocingo ukuze isibalo Uyothola i-SMS, othi into efana: "Lo lokubhalisa inombolo ethile opharetha bafaka isicelo ukucacisa indawo yakho. Vumela isicelo? "
Khona-ke wonkhe umuntfu kweyeme etinyatselweni isenzo somsebenzisi, kodwa ngicabanga, bambalwa kakhulu abantu kuzokuvumela ukusizakala le ndlela.
Imiphi imigomo wena eziziphishekela?
Empeleni, lokhu kubaluleke kakhulu. Kuyinto into eyodwa - ukuzama ukucacisa indawo inombolo yocingo, okuyinto seliphelile noma esalibele, futhi kuyinto engenakwenzeka ukuba uthole ngokusebenzisa kuye, kodwa wathembisa ukuba ekhaya ngesikhathi. Sekuyinto elinye - ukuzama ukucacisa izixhumanisi, uzama ukubamba indoda red ngilambatha nge sisola lokuvukela umbuso, isibonelo.
Ngaphambi kokuqala ukudlala Sherlock Holmes, zibuze umbuzo owodwa: Ingabe ukulungele ukwenza lokho ungathola? Ngokwesibonelo, uma usola indoda noma inkosikazi lokungakholwa, futhi lokhu kuqinisekisiwe, wenzani? Uma wazi impendulo, bese ungakwazi bajabule ngawe. Futhi uma nikwenza lokho nento elula njengokuthi kwakubonakala, futhi mayelana nanoma yiziphi izinguquko futhi alikhulumi? Mhlawumbe nje ngoba ujike futhi ukuze umuntu nje ikhipha ukuthi akafuni ukuba download. Noma ingabe ngempela into uzifihla, kodwa kuphela ukuze senze wena yinto emnandi ababengayilindele.
Kunoma ikuphi, ngaphambi kokuthi uqale ukucinga uhlelo kuzokusiza uthole indoda, khumbula izingozi kanye nemiphumela yena. Phela, njengoba besho - lowo odinga uyohlale ukuthola.
Indlela yokuhumusha nge "Tele2" ukuze "Beeline" imali?
Salt-free Ukudla Elena Malysheva - ngempumelelo kangakanani? Izimpendulo zemibuzo evame kakhulu wabuza
Ukudansela isiginci sakhe isondo ukuba benzeni, nokuxazulula izinkinga futhi iseluleko ochwepheshe
Zokupheka Traditional ukhwehlela kusukela uphawu kuzophela